Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakagadzirira kutaura neEthiopia panyaya yevaive mutungamiri wenyika wenyika iyi Mengistu Haile Mariam uyo akatongerwa rufu nenyaya dzekuponda vanhu.
aShava vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakagadzirira kutaura neEthiopia ikaite zvinotarisirwa munyaya dzekudyidzana kwenyika.
Mengistu akapotera muZimbabwe muna 1991 mushure mekutungamira Ethiopia kwemakore gumi nemana. Mauto ake aizivikanwa nekuti Derg akwanikwa aine mhosva dzekuponda vanopikisa pamwe nehama dzavo.
Muna 2008, dare remuEthiopia rakatongera Mengistu rufu richimupomera mhosva dzekuponda zviuru nezviuru zvevanhu. Asi Zimbabwe haina kuratidza chido chekuti adzokere kuEthiopia kunyangwe ainge abatwa nemhosva idzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaKennedy Masiye vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iyo isingadi kuisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvinorambidza kuitwa kwevanhu kafiramberi uye zvimwe zvekuendesa vanpara mhosva dzehondo kumatare kana kuti kuti International Criminal Court inoratidza kuti haina kuzvipira kuomesera vanoponda vakaita saMengistu.